Secure Series Factory | I-China Secure Series Abakhiqizi nabahlinzeki
I-SEcure-U ICU Medical Hanging Bridge
I-SEcure Medical Hanging Bridge inikeza ipulatifomu ephephile futhi esebenza kahle kakhulu ye-ICU, CCU, PICU, NICU njalonjalo i-SEcure-U iyimodeli eyenzelwe izingxenye ezihlukanisiwe ezomile nezimanzi.
I-Secure-SJW Pendant Yokuhlinzwa
I-pendant yezokwelapha ivame ukusetshenziswa egumbini lokuhlinza, e-ICU nasekamelweni lokulethwa. Inikezela ngeplatifomu yokulayisha, umthombo womoya nokunikezwa kwamandla kwemishini yezokwelapha ehlobene. I-SHINVA SEcure-SJW elengayo elengayo lokuhlinza elinengalo eyodwa noma engabili linikeza indawo ephephile, esebenza kahle futhi ehlanzekile yodokotela nabahlengikazi.
I-SEcure-H ICU Medical Hanging Bridge
I-SEcure Medical Hanging Bridge inikeza ipulatifomu ephephile nephezulu yokusebenza kahle kwe-ICU, CCU, PICU, NICU njalonjalo ku-SEcure-H kuyimodeli eyenzelwe izingxenye ezihlanganisiwe ezomile nezimanzi.